पीडित युवती भन्छिन्–बेहोस बनाएर बलात्कार गरे - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कृष्णसिंह धामी || 19 May, 2022
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ । त्यसमा पनि सन् २००२ कि मिस नेपाल विजेता माल्भिका सुब्बासम्मलाई जोडिएको छ ।
‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं’ भनेर म्यासेज आयो । त्यति म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित भइन् । त्यसरी म्यासेज पठाउनेमा थिए, ती फोटोपत्रकार ।
ती फोटोपत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचे र उनलाई ५ हजार पैसा दिए । फोटो खिचेर उनीहरूले भने कि हामीले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दैछौं । म त्योभन्दा अगाडि पनि ब्युटी प्याजेन्टमा भाग लिइसकेकी थिएँ । त्यसले म राजी भएँ । ब्युटी प्याजेन्टको विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो । उनी तयार भइन् ।
यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु।
त्यसपछि उनले त्यो खाइन् । खाएको १० मिनेटपछि उनी आफुलाई अनकन्सियस महसुस गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले त्यो एब्युजरलाई भनिन्– मलाई गाह्रो भयो, म घर जान चाहन्छु ।
तिम्रो ब्यागमा २० हजार हालिदिएको छु । घटनाबारे कोहीलाई पनि केही भन्यो भने तिम्रो नाङ्गो फोटो र भिडियो मेरो मोबाइलमा छ, सार्वजनिक गरिदिन्छु, मेरो साथी चर्चित फोटोग्राफर छ ।
त्यसपछि ती एब्यूजरले उनको ब्यागमा २० हजार पैसा हालिदिए र भने, ‘तिम्रो ब्यागमा २० हजार हालिदिएको छु । घटनाबारे कोहीलाई पनि केही भन्यो भने ‘तिम्रो नाङ्गो फोटो र भिडियो मेरो मोबाइलमा छ, सार्वजनिक गरिदिन्छु, मेरो साथी चर्चित फोटोग्राफर छ ।’
मैले त्यो बेला सबै कुराहरू भनेँ । मलाई गरेको फोन रेकर्ड, मलाई गरेको म्यासेज सबै देखाइदिएँ । मेरो ब्वाईफ्रेण्डले त्यो मान्छेलाई धेरै पिट्यो ।
त्यो समय मलाई यस्तो भयो भने के गर्ने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? थाहा थिएन । अहिले पो थाहा पाएँ । अनि घटना सार्वजनिक गरेकी हुँ ।
उनी ६/७ वर्षको हुँदा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यही बेलादेखि उनको सपना थियो–ठूलो भएपछि मोडल हुन्छु, कलाकार हुन्छु । तर, उनको सपना त्यही घटनाले तुहाइदियो ।
कुनै पनि केटीहरू आफ्नो आमालाई नलगी कहिँ पनि नजानु । यो मेरो अनुरोध मात्र होइन्, बिन्ती पनि हो ।
हामी पीडितलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । उहाँ सम्पर्कमा आएपछि मात्रै अनुसन्धानका अन्य पाटा अघि बढ्छन्।
पल-समिक्षा : तनहुँको एउटा कोठादेखि प्रहरी अड्डासम्म
बलात्कार मुद्दामा जाहेरी नै नपर्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] पनि…पीडित युवती भन्छिन्–बेहोस बनाएर बलात…बलात्कारविरुद्ध प्रधानमन्त्री […]
बलात्कारविरुद्ध प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन (फोटो फिचर) - Mero LifeStyle Mero LifeStyle